Roll akpụ Machine, roofing mpempe akwụkwọ Machine, gọta Ime Machine - Zhongtuo
House etiti igwe
Metal ụzọ igwe
Adịghị adị Ziri na panel igwe
Akpa ụlọ igwe
Cangzhou ZHONGTUO mpịakọta akpụ ígwè bụ ọkachamara emeputa na ekspootu nke a pụrụ iche na imewe, mmepe na mmepụta nke oyi mpịakọta akpụ ígwè ọrụ. The ụlọ ọrụ na-akwado mkpebi ọtụtụ mmepụta ụlọ mmepụta ihe na metụtara ụlọ ọrụ. Engineers na technicians ndị ọgaranya na ahụmahụ nke emebe, na-emepe emepe, na n'ichepụta nke ígwè ọrụ. Anyị ṅara ntị ọhụrụ na-emekarị nke teknụzụ. All ngwaahịa ime na mba àgwà ụkpụrụ na na-ekele dị ukwuu maka na ahịa n'ụwa nile. Anyị na ngwaahịa na e nye karịa mba 40 ...
Cangzhou Zhongtuo Roll akpụ Machinery Co., Ltd.
Q: Tim, m wee ịzụta ụfọdụ plastic igbapu anwụrụ, na mgbe na-achọ na niile ụdị, isi m malitere-ewute m. M kpebiri na m na-ahapụ ụlọ ahịa na-eme nnyocha ụfọdụ. M nwetara ọtụtụ oru ngo nke m mkpa a plastic anwụrụ ....
Anyasị Update: Trans Mountain pipeline r ...
Isiokwu bụ onye eguzosi ike n'ihe n'ezie na Chief majie agaghị nye ndụmọdụ ma ọ bụ n'okpuru aka ike jikoro. The Liberal kabinet ka re-mma na Trans Mountain pipeline mgbasa, nke ga tinye ihe fọrọ nke nta 600,000 ba ...
Mgbe ụfọdụ anyị testers na nso nso were Giant si TCR Advanced Pro SL1 maka a atụ ogho, ọ dị na ya kwesịrị a ezi nnukwu igwe na-enye ihe niile ị ga-amasị chọrọ si a ọduọ thoroughbred. Ma gịnị ka ị pụrụ expe ...
The oversea n'ụlọ nkwakọba na India na South ...
Anyị, ZHONGTUO Roll akpụ Machinery e rere anyị na ngwaahịa na ihe karịrị 60 N'ókèala na Areas, karịsịa na India na South America. Anyị nwere ike na-enwe obi ike na anyị Roll akpụ Machine ga-eme ka ...
Oyi Rolling akpụ igwe ojiji na ndụ
Mgbe na-abịakwute okwu nke oyi Rolling akpụ igwe, ọtụtụ n'ime ndị na-adịghị maara na. Ma mgbe na-abịa na-ewu ụlọ, na ụbọchị ọ bụla anyị nwere ike na-ahapụ ya. Were Brazile oru ngo maka ihe atụ t ...
Stud Track Machine, Hg50 tube Line, Roofing mpempe akwụkwọ Ngidi Ime Machine, Metal oche-akpụ Machinery , Nzọụkwụ Ngidi Ime Machine , Rolling Shutter Door Roll akpụ Ime Machinery ,